Global Voices teny Malagasy » Tantara antserasera momba ny fialan’ireo Venezoeliana ny fireneny · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Oktobra 2018 13:46 GMT 1	 · Mpanoratra José González Vargas Nandika (en) i Alexis Faber, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Venezoela, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Pikantsarin'ny fijoroana vavolombelona maro ataon'ny tanora izay manadihady ny diany rehefa mandao an'i Venezuela izy ireo.
Sarotra ny mamaritra mazava tsara hoe firy ny Venezoeliana nandao ny fireneny. Manizingizina ny gazety iraisam-pirenena fa mbola “mampiahiahy”  ny isa notaterin'ny governemanta Venezoeliana. Milaza ny tahiry  farany indrindra avy amin'ny Vaomiera Ambonin'ny Firenena Mikambana misahana ny Mpitsoa-ponenana  fa olona roa tapitrisa eo ho eo no nandao ny firenena- tatitra izay nolazain'ny  governemanta Venezoeliana sy ny mpiara-dia aminy fa sandoka. Ny zavatra hita aloha dia ny fitomboan'ny tambajotra fanohanana virtoaly sy ny Venezoeliana isan-karazany miditra media sosialy mba hizara ny tantaran'izy ireo, ny tolo-kevitr'izy ireo sy ny fandinihana manokana rehefa miala ny fireneny izy ireo – manome feo sy endrika mankany amin'ny antontanisa henjana dia henjana.
Tantara manokana sy tambajotran'ny firaisankina
Yosy, vehivavy 23 taona, Venezoeliana, dia iray amin'ireo olona maro izay mikasa ny hanoratra ny tantarany sy hanampy ny hafa hanohy ny diany. Tao amin'ny fantsony YouTube , mamariparitra ny traikefany tamin'ny fifindramonina izy, voalohany tany Panama ary avy eo tany Arzantina. Ankoatra ny dingana fiatiana, dia nandinika ny antony nanapahany hevitra handao ihany koa izy:
Ao amin'ny fireneko, tsy misy fanafody, tsy misy dokotera, tsy misy fitsaboana. Any amin'ny fireneko dia misy ny fahafatesana isan'andro. Ao amin'ny fireneko dia tsy misy sakafo, fa misy tsy fahampian-tsakafo. Ao amin'ny fireneko, tsy misy ny fiarovana, fa misy ny herisetra marobe. […] Gaga ve ianao? Izahay tsy gaga intsony.
Azo jerena amin'ny alalan'ny fikarohana tsotra ny lahatsary YouTube am-polony maro ahitana lohateny hoe “Ny diako any Però, tsy misy pasipaoro”, “Toro-làlana 9 hidirana ao Cúcuta, Kolombia avy any Venezoela ” ary “Ny diako an-tanety mankany Shily miala ao Venezoela “. Ireo rehetra ireo dia mirakitra tantara manokana mampiseho ny fifindramonin'ny Venezoeliana ary miasa ho toy ny torolàlana ho an'ireo izay mikasa ny hanao toy izany koa. Ao amin'ny lahatsary tsirairay, afaka mahita ireo fahasarotana sy loza mety hitranga ho an'ireo mandeha an-tanety ny mpijery. Ohatra, ao amin'ny “Toro-heviny miisa 9″ , mpisera Youtube Oriana mizara ny zavatra mety hitranga amin'ny olona rehefa eny amin'ny fiafaran'ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka ary koa ireo mitranga amin'ny antontan-taratasy ara-dalàna:
Avy ao Cucuta mankany Bogotá, na tanàna akaiky, tokony misy toeram-pisavana 20 farafahakeliny izay ahatongavan'ny polisy anaty fiara fitateram-bahoaka, misava kara-panondro ary manamarina raha ara-dalàna ny tombokatse amin'ny pasipaoro. [Izany rehetra izany] dia noho ny fifindramonin'ny Venezoeliana tsy voafehy ao amin'ny faritra Kolombiana […] Ao amin'ny fara-fiantsonana ao Cúcuta, dia tsy maintsy mankany amin'ny lakavy ianao raha te-hitahiry entana, handro, na ampiasa efitra fidiovana. Tokony ho hentitra amin'izany ianao: ny lakavy no hany faritra azo antoka. Tena mampidi-doza ny faritra ivelan'izany fara-fiantsonana izany …
Mandritra izany fotoana izany, nanangana vondrona Facebook, ary mampiasa Twitter sy tambajotra sosialy hafa mba hanome fanohanana sy toro-hevitra any amin'ny toerana tahaka an'i Kolombia , Ekoadaoro , Shily , sy Espaina - tambajotra firaisankina virtoaly ho an'ireo tsy maintsy mandao ny fireneny ireo vondrom-piarahamonina Venezoeliana maromaro any ivelany.
Fomba hafa hanampiana
Nampiahiahy ireo FTMF =ONG sasany izay manohana ny mpifindra-monina ny toe-draharaha momba ireo Venezoeliana mandao ny firenena. Anisan'izany ny tambajotra Zezoita ho an'ny mpifindra monina sy ny sampana Zezoita ho an'ny mpitsoa-ponenana avy any Amerika Latina sy Karaiba izay nanamboatra “sarintany virtoaly”  mba hanampiana ny fiarovana ny olona rehefa mandeha mankany Brezila, Kolombia, Ekoadaoro na Però. Ny tetikasa dia ohatra iray hafa amin'ny halehiben'ny fifindra-monin'ny Venezoeliana, izay heverina ho lehibe indrindra any amin'ny faritra  tao anatin'ny 50 taona farany.
“Lalana virtoaly” vita antsipiriany namboarin'ny tambajotra Mpifindra-monina Zezoita, ny sampana zezoita ho an'ireo mpitsoa-ponenana Amerikana Latina sy Karaiba mba hanampy ireo mpifindra-monina. Mampiseho tahiry sy vaovao momba ny fikambanana afaka manampy ireo olona miala ao Venezoela mankany amin'ny firenen-kefa ao amin'ny faritra ny toro-lalana. Ahitana lisitry ny vaovao momba ny saram-pitaterana, ny fotoana sy ny lalana izorana ihany koa izany.
Ankoatra ny làlana izorana, zava-dehibe ny mahatsiaro ireo fepetra henjana izay atrehan'ny Venezoeliana rehefa manomana ny diany izy ireo. Etsy an-daniny, misy ireo famerana sarotra sy marobe rehefa miditra amin'ny antontan-taratasy ara-dalàna. Ny fahafahana mahazo pasipaoro, ohatra, dia mety midika miandry hatramin'ny roa taona  na mandoa vola fanampiny  mba hamoahana na hanavaozana azy. Etsy andaniny, ny fiakaram-bidin'entana tsy mitsahatra  sy miharihary (izay tokony hahatratra 1 tapitrisa isan-jato  amin'ny taona 2018) no mahatonga ny fiovan'ny teti-bola rehetra isan'andro.
Ho hita eo izay vahaolana mety hanampy amin'ny famahana ireo olana goavana mitranga ao anatiny sy ivelan'ny firenena. Hatramin'izao, satria mitombo ny isa ao ambadiky ny fifindra-monina (ary koa ny fifandonana amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina ), tsy mampiseho marika fihenana ny zava-mitranga amin'ny fifindramonina Venezoeliana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/30/128547/
 fantsony YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCL8rcNCUW1Luv6nyJdZOD5w/featured
 Ny diako any Però, tsy misy pasipaoro”, “Toro-làlana 9 hidirana ao Cúcuta, Kolombia avy any Venezoela: https://www.youtube.com/watch?v=GWtBvO62z9I
 Ny diako an-tanety mankany Shily miala ao Venezoela: https://www.youtube.com/watch?v=BN-tyapqQ0M
 ao amin'ny “Toro-heviny miisa 9″: https://www.youtube.com/watch?v=SmBbGG3r6MQ
 Espaina : https://www.facebook.com/groups/venezolanospeninsulaiberica/?ref=br_rs
 nanamboatra “sarintany virtoaly”: http://puntodecorte.com/descargable-jesuistas-guia-para-migrantes-venezolanos-con-rutas-tramites-y-precios/
 lehibe indrindra any amin'ny faritra: http://www.el-nacional.com/noticias/bbc-mundo/exodo-venezolano-mayor-latinoamerica-los-ultimos-anos_249232
 miandry hatramin'ny roa taona: https://cnnespanol.cnn.com/video/la-odisea-de-obtener-el-pasaporte-en-venezuela-pkg-jorge-perez-valery/
 mandoa vola fanampiny: https://www.abc.es/internacional/abci-hasta-1000-dolares-piden-renovar-pasaporte-venezolano-201807150428_noticia.html
 fiakaram-bidin'entana tsy mitsahatra: https://www.theguardian.com/world/2018/aug/20/venezuela-bolivars-hyperinflation-banknotes
 1 tapitrisa isan-jato: https://www.nytimes.com/es/2018/07/24/inflacion-venezuela-record/
 fifandonana amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina: https://www.playgroundmag.net/now/fuera-nicas-fuera-venezolanos-una-ola-de-xenofobia-recorre-latinoamerica_30446129.html